Company daboolayaa deegaanka
hantida magaalada Company
war abuurashadoodii patent
Shirkadda High-tech in ruuxa hal-abuurnimo oo madax banaan, Soonlink Technology si firfircoon uga fulinayaa "Industry-University-Research Policy Joint" oo uu aasaasay xiriirka dhow la leh Academy Chinese ee Sciences, University Tsinghua (Shenzhen) Graduate School, University magaalada Bekiin (Shenzhen) graduate School, University Shenzhen, iyo University Fudan. In si qoto dheer iskaashiga. Soonlink Technology sidoo kale ku tiirsanaan doonaa xoog cilmi sayniska iyo sare goobaha xoogan oo Institute Shenzhen ee Tiknoolajiyadda Casriga ah ee Academy Chinese ee Sciences in la dhiso Kundarbetsplats a postdoctoral. Kuwani waxay ka abuuray boosteejo ah oo u wanaagsan Shiinaha Sayniska iyo Technology Midowga inay soo bandhigto, baaqbaaq iyo isticmaali talanti-dhamaadka sare. Illaa iyo hadda, Shiinaha Science iyo Machadka Technology ayaa codsatay daraasiin shatiyada qaranka, oo si wadajir ah ula waaxda cilmi-baarista iyo horumarka kale ee Shiinaha Sayniska iyo Technology Association, ayaa soo saartay xalka lacagta mobile kaarka YooCan, taas oo uu leeyahay xuquuqda gebi ahaanba madax banaan hantida aqooneed iyo ayaa commercialized on qiyaasta weyn.
Waxaan xoojinta maamulka gudaha iyo xoojinta awoodda dhamaan shaqaalaha ee, iyo isagoo sheegay on our damaanad, in mas'uul ka yahay tayada iyo siinta adeeg buuxa macaamiishayada. Waxaan fuliyaan siyaasadda ee ka hortagga iyo deegaanka ilaalinta wasakhda iyo eryan maamulka Dadka Jihaynta. Iyagoo ku adkaysanaya inay istaraatijiyadda horumarinta ee ku tiirsan technology, waxa aanu had iyo horumarinta waxyaabaha cusub, oo isugu dayeynaa in aannu qayb-qaato horumarinta xogta wireless warshadaha 2.4GHz gudbinta.